Safety na-electric skateboard sịrị arịọ ndị kasị mma ajụjụ? - Jomo Technology Co., Ltd
Safety na-electric skateboard sịrị arịọ ndị kasị mma ajụjụ?
Banyere mmepụta nke skateboard, ị nwere ike iji na-atụgharị uche ụfọdụ ndị mejupụtara ya mmepe. Ọ bụrụ na ị na-amasị echiche nke ihe electric skateboard , Ma na ị hụrụ n'anya gị ugbu ntọlite, ị chọrọ iji lee anya na eon: isi modular electric Powertrain. Na a ngwa ngwa paced ụwa dị ka nke anyị, ijeụkwụ na price arụmọrụ bụ ihe dị mkpa ọcha na okwu nke njem. Ọ bụ ya. Ma dị ka a ụgbọala, ike ọsọ na ịdị iche iche na-Ọzọkwa mkpa, n'ihi na i nwere ike ọ bụghị naanị kwụsị midway na-ana bilie n'etiti okporo ụzọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-ada na ala, mpịakọta ruo mgbe ị kwụsịrị iji na-pụọ skidding. Ọ na-haziri maka na a handheld anya na-ahapụ gị na-amalite ya, na-akwụsị na ya ma na-agbanwe ihe ike ọsọ, na ya nwere ihe abụọ ụdịdị ịnabata ọhụrụ ma ọ bụ ọkà ahịa. Ọ dị mfe ịhụ ihe mere akụkụ ndị a tremendously emetụta nka na arụmọrụ. Ọ bụ ihe magburu onwe enyi maka anya-ụzọ ahụmahụ, Otú ọ dị oke clunky ihe-achọghị nke nkịtị ojiji.
Ya mere, ihe dị ukwuu a ole na ole electric skateboard? I nwekwara ike ịchọpụta si a remote management ọnụ gị skateboard-agba ọsọ site na ọkụ eletrik. The Inboard bụ a bit nke na arọ n'akụkụ ma ihe o doro anya na kpụrụ anya na n'ezie pụtara snug jide, maka nnoo na ọtụtụ akụkụ. Mgbe ọ nọrọ nso awa 200 na-eme nnyocha na- zuru okè ụdị na ụdị na ahịa, anyị zụtara n'elu 10 mbadamba dị na ahịa nri oge a na-anwale ha akụkụ-na-n'akụkụ chọpụta nke e-skateboard n'ezie na-achị ha niile! Anyị na mere ọtụtụ electric skateboard nwete chọpụta nke mbadamba bụ nnọọ mma electric skateboards . An electric skateboard iche na a na-ahụkarị skateboard site na-enwe a motorized mgwa na-eme ka eji a skateboard a dum Heck nke kama a ọtụtụ mfe maka a ọhụrụ onye na-agba na-enye ihe dị n'ezie igba ka ahụmahụ na-agba. Uru - Dị ka a isi ọchịchị nke isi mkpịsị aka, na electric skateboards ị ga-esi ihe ị na-akwụ maka.
Ghaghị. N'eziokwu, electric skateboards bụ onye nke kasị mma ọzọ nhọrọ maka Ikpeazụ Mile njem. Koowheel ike ike ẹkenam akụkọ ihe mere eme nke Anọ wheel Electric Skateboard na ejima moto, na-eji maka nkenke anya strolling na na. N'ime ihe ndị mere nkịtị ike ọsọ nke 30km / h, ndụ batrị pụrụ ịbụ banyere 20 ka 25km. Ị ga-enwe ike na-agụ zuru Dynacraft electric skateboard nnyocha ebe a. Ma ị na-achọ ka ha bulie a ọhụrụ ji egbu oge ma ọ bụ dị nnọọ anya jụụ nchọgharị na pavement, na coolest electric skateboards bụ ebe a n'ihi na ị na lelee. Iji ichikota - ka unu a ngwa ngwa, a pụrụ ịdabere na na n'elu ihe nile di ala electric skateboard , mgbe ahụ koowheel 2 ọgbọ kooboard bụ ihe ị na-achọ! Ihe dị oké mkpa atụmatụ na ihe nlereanya i na-az ga bụghị skimp on bụ nhọrọ nke tupu set ịnya ụdịdị. Ndị a njem na ngwaọrụ ndị obere na-kwadoro site na a rechargeable batrị nke nwere ike ma a ga-eji dị ka gị isi ụdị njem ma ọ bụ nwere ike tinye n'ọrụ na-esi na si ọha iga. Nke a full longboard eji a lithium-ion batrị napụta n'ihu zip gị longboarding ụtọ, ọkụkụ gbapụrụ ọsọ ruo 26 mph (42kph) nke otu ebe iji.
Ndị a electric skateboards ndị dị mfe na-eri na-eji. The isi electric skateboards e mbụ e mere na-enweta na otu na-ebupụta ka anyịnya igwe na ụgbọala. E nwere ndị dị otú ahụ a otutu electric skateboards si dị na ahịa ugbu a, na ọ bụ kama na-eweta nsogbu na-elele board ịbanye ọbụna na a warara akụkụ dị ka naanị ijeụkwụ na ịdị iche iche. Electric skateboards ezitekwara nnukwu ndụ uru na agba na ike tụgharịa ụbọchị ọ bụla n'ụzọ n'ime ihe na-akpali akpali ahụmahụ. N'ụzọ bụ ndị kasị mmepe na technology kwadebeere ndị a electric skateboards. Six kilomita ike-ezu nso n'oge adopters na Fans, ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu na e obere commutes. M nkọ imebi enwe ọtụtụ obere ọsọ na mbio maka ihe na-bụ n'ezie obere.
Post oge: Mar-07-2018